Colaadda Tigray, Itoobiya - Diblomaasi
Tan iyo markii uu dagaalku billowday bishii Nofeembar 2020, colaadda Tigray ayaa sii faaftay waxayna khalkhal gelin kartaa gobolka Geeska Afrika oo dhan. Waa tan sida ay wax u socdaan.
Waa ciidamada Tigreega oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo isu diyaarinaayo dagaal ka dhan ah dowladda dhexe ee Itoobiya.
Wadahadalka nabaddeed ee gumeysi-diidka ONLF iyo Dowladda Itoobiya
Wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya ONLF iyo Dowladda Itoobiya ayaa bilowday sannadkii 2012-kii, waxaana hoggaaminayay koox ka socotay dowladda Kenya. Ururka Resources Conciliation Resources ayaa lagu casuumay inay taageerto wadahadaladan, iyadoo talo farsamo siinaysa kooxda Kenya iyo dhinacyada isku haya lixdii sano ee wada xaajoodka. Waxaana ka mid ahaa tabbabarka diyaarinta wada-xaajoodyada, ka-talinta geeddi socodka nabadda ee ballaaran iyo gacan ka geysashada diyaarinta heshiiska nabadda ee kama-dambaysta ah.
Heshiiska waxaa lagu saxiixay magaalada Asmara, Oktoobar 2018 Eriteriya. Waxay soo afjartay colaaddii waxayna u gogol xaadhay in ONLF ku soo noqoto gobolka oo ujeeddooyinkeeda siyaasadeed ku fushato hab nabdoon. Madaxda JWXO ayaa hadda isu diyaarinaaya inay u diyaar garoobaan ka guuristooda mucaaradka hubeysan una gudbaan urur siyaasadeed.
Colaadda xadka Oromada iyo Soomaalida iyo colaadaha gudaha ee Soomaalida ee la xiriira xuduudaha, xuquuqda daaqaha, helitaanka iyo xakamaynta ilaha dawladda hoose ayaa ah caqabadaha isasoo taraayo. Hadda se waxaa soo cusboonaaday mid kale oo horleh, gobolka Tigray!
Yaa ku dagaallamaya Gobolka Tigray?
Askarta dawladda Itoobiya iyo dagaalyahannada Tigreega ayaa ku dagaallamaya gacan ku haynta gobolka woqooyiga Tigray ee dalkaas. Jabhadda Xoreynta Dadka Tigrayga (TPLF) waxay u aragtaa ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed cadow: 25 sano ka hor inta uusan noqon hoggaamiyaha Itoobiya ee 2018, TPLF waxay xukumaysay siyaasadda qaranka iyo magacaabidda wasiirrada, xukuumadda iyo milatariga. Dadka wax naqdiya ayaa ku tilmaamay isbahaysiga ay hormuudka ka tahay TPLF waxay ku tilmaamtaa Abiy Axmed mid kaligii taliye ah. Abiy, oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, ayaa TPLF ka xiray isbahaysigiisii cusbaa, wuxuuna ballanqaaday dib u habayn dimuqraadiyad ku dhisan.
Sidee ku bilaabatay?
Bishii Nofeembar 2020, RW Abiy Axmed wuxuu amar ku bixiyay in weerar milatari lagu qaado Tigray. Wuxuu ku eedeeyay TPLF inay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada Itoobiya ku lahaayeen gobolka.
Xiisadda u dhaxaysa dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa sii kordhaysay bilihii la soo dhaafay, ka dib markii Tigray ay qabatay doorasho goboleed bishii Sebteember 2020 iyadoon oggolaansho laga haysan dawladda dhexe. Dawladdu waxay dib u dhigtay doorashooyinkii guud ee horaantii sanadka, iyada oo sabab uga dhigaysa walaaca korona fayrus.
Markii hore waxay u muuqatay in ciidanka Itoobiya jabiyay TPLF. Laakiin bishii Juun 2021 ayay kooxda TPLF dib ula wareegtay magaalo madaxda gobolka Tigreega ee Mekele. Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay xabbad-joojin 28-kii Juun. Laakiin dagaalku wuu sii socday wuxuuna bilaabay inuu saameeyo gobollada deriska la ah Amxaarada iyo Canfarta.
Dagaalka sidee u saameynayaa dadka rayidka ah?
Dowladdaha dariska Itoobiya sidee uga falceliyeen?
Colaadda Tigray waxay sare u qaadday xiisadaha Geeska Afrika oo dhan. Eriteriya waxay la safatay dawladda dhexe ee Itoobiya. Wadamadan ayaa ilaa dhowaan dhex marayay muran xuduudeed oo uu dhiig ku daatay tan iyo markii Eriteriya ay xornimada ka qaadatay Itoobiya sanadkii 2000.
Bilowgii xilkiisa, ra’iisul wasaare Abiy Axmed wuxuu damcay inuu haggaajiyo xiriirka Itoobiya iyo Eriteriya. Dhanka kale kooxda TPLF ayaa cadow ku ah Eriteriya.
Dowladda Soomaaliya ciidamadeeda tabbabarka loo geeyay Eriteriya ayaa la sheegay inay iyadana u dirtay dagaalka ka socda gobolka halka Dowladda fedaraalka ee Soomaaliya ay beenisay.
Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo BBC la hadlay ayaa sheegay in aysan gabi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigray.
“Ma jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Togray, sabab ay u dhacda-na ma jirto, cid naga codsatay na ma jirto,,” – ayuu yiri wasiirka warfaafinta.
Mr Dubbe ayaa warar been abuur ah ku tilmaamay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomalaiya ay ka dagaalameen gobolka Tigray, islamarkana la doonayo sida uu hadalka u dhigay in lagu wiiqo awoodda ciidamada Soomaaliya.
Qiyaastii 50,000 oo qof ayaa ka qaxay colaadda Tigray waxayna u gudbeen dalka deriska la ah ee Suudaan. Khilaaf gaar ah, Itoobiya iyo Suudaan ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu u oggolaaday ciidamadooda inay ka gudbaan xuduud wadaag ah oo lagu muransan yahay.
Xagga dambe, colaaddu waxay halis gelisay horumarka laga gaaray Biyo-xidheenka Weyn ee Itoobiya, mashruuc weyn oo korontada laga dhaliyo ah kaas oo sidoo kale xiisad u ah Suudaan iyo Masar, oo ku tiirsan wabiga hoose ee Niil.
Sidee dunidu uga falcelisay colaada gobolka Tigray, Itoobiya?
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo siyaasiyiinta hoggaaminaya ayaa dalbaday xabbad-joojin iyo in shaqaalaha gargaarka ay tagaan gobollada ay dhibaatadu saameysey. Maraykanku wuxuu ka dalbaday TPLF inay ciidamadeeda kala soo baxdo gobollada Canfarta iyo Amxaarada, iyada oo isla mar ahaantaana cunaqabatayn lagu soo rogay saraakiisha Itoobiya iyo Ereteriya.
Midowga Yurub ayaa joojiyay taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray dawladda Itoobiya. Faransiiska ayaa joojiyay taageeradii milatari ee uu siin jiray Itoobiya.
Saameynta sii kordheysa ee iskahorimaadka ee dalalka deriska ah ee Suudaan iyo Eriteriya ayaa sare u qaaday walaaca caalamiga ah ee ku saabsan xasilloonida Geeska Afrika.
Waa maxay aragtida guud ee colaada?
Colaadda ayaa halis ku ah inay sii korodho: Ciidanka Xoraynta Oromada oo ah koox hubaysan oo ka soo jeeda koonfurta Itoobiya, ayaa ku dhawaaqay inay la shaqeeyaan TPLF. Labada kooxoodba waxay rabaan inay la dagaallamaan dowladda dhexe.
Dhanka kale, ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ugu baaqay dhammaan dadka Itoobiya inay la dagaallamaan kooxda TPLF, taasoo muujinaysa inay dhammaatay baaqiisii xabbad-joojinta. Intaas waxaa sii dheer, dowladdiisu waxay hakisay howlihii laba kooxood oo waaweyn oo gargaar caalami ah, qeybta Dutch-ka ee Dhakhaatiirta Aan Xudduudda Lahayn iyo Golaha Qaxootiga Norway, iyagoo ku eedeysay inay faafinayaan “warar-qaldan.
Related Topics:Colaadda TigrayFeaturedItoobiya
Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday Masar, Suudaan iyo Itoobiya ‘inay dib u bilaabaan wadaxaajoodkii’ mashruuca biyo-xireenka weyn
Rabshado kufsiga ayaa ka soo ifbaxaya gobolka ay colaaduhu aafeeyeen ee Tigreega, Itoobiya